Lakulan: Deeqsiga 8 sano lacag la’aan ku kaalmeeya dadka dan-yarta | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka March 27, 2017	0 353 Views
Moscow (Himilonews) – 8-dii sano ee lasoo dhaafay, ku dhawaad laba boqol oo ah qoysas ku nool degmada Strunino – magaalo yar oo ku taalla gobalka Vladimir Oblast ee dalka Ruushka kama aysan warwarin iibsiga Rootiga. Mahadaas waxay ku laabaneysaa deeqsiga leh dukaan weyn kaas oo si lacag la’aan ku siin jiray.
Mamoud Shavershyan, wuxuu Ruushka uga yimid dalka Armenia, 25 sano kahor. Wuxuu u sheegay sida injineer kahor intuusan furin goobtiisan ganacsi – oo aan ka duwaneyn ganacsiyada kale ee Strunino.
Hayeeshe wax kasta waxay is badaleen hal maalin – 8 sano kahor, mar isaga oo fadhiya qasnadiisa, Mamoud wuxuu arkay haweeney da’ ah oo tirinaysa shilimaad si ay ugu iibsato Rooti. Wuxuu aad ugu nuglaaday sida ay ugu dhiban tahay nolosheeda. Wuxuuna ku siiyay cunnadii ay rabtay lacag la’aan. Isla maalintaas, wuxuu sameeyey go’aan. Mamoud wuxuu taasi u maray inuu ku xayaysiiyo wargeys gudeedka degmada.
Hayeeshe taasi waxay kaliya aheyd anba-qaad. Durba, Mamoud wuxuu ku baahiyay deeqsinimadiisa dadka qaba baahiyaha gaarka ah, qoysaska ballaaran ee dakhliga yar iyo guud ahaan saboolka.
Warkiisu wuxuu u baahay sida dab-duureedka in yar dabadeedna dadka dan-yarta ah ee ku nool duleedka degmada ayaa bilaabay inay soo tiigsadaan.
Maanta, dukaankiisa wuxuu bixiyaa 2,000 iyo 1,000 Rooti cadde iyo madoobe isugu jira bil kasta. Wuxuu sidoo kale dukaankiisa joogto ugu deeqaa xanaanooyinka iyo xilliyada fasaxa.
Hayeeshe naxariistoodu, Mamoud iyo qoyskiisu waxaa loogu abaal-naqaa caay iyo meel ka dhac iyo xatooyo lagu eedeeyo.
“Yaan nasiiyay Rootiga lacag la’aanta ah? Madaxweyne Putin! Yaa kale,” nin kamid ah dadka yimid si ay u qaataan Rootiga ayaa ku qeyliyay “Madaxweynuhu wuxuu bixiyay amar cad oo ah in danyarta Ruushka la caawiyo. Hayeeshe dadka soo-galootiga ah waxay in badan ku keydsadeen gacmahooda; in yarna way bixinayaan. Waxay Ruushka ku yimaadeen tiro badan. Waxayna quutaan dakhligeenna,” ayuu sii yiri isaga oo kasii qaadnaya Rootigiisa dukaanka Mamoud.
Nasiib-darrase, badi dadku waxay wadaagaan aragtidiisa oo kale. Mamoud Shavershyan wuxuu sheegay inuu abaal uga fadhiyo Rabbigii uumay. “Alle unbaa qiimeyn kara naxariista, maya dadka,” ayuu u sheegay Kommersant. Wuxuu inta badan u sheegaa xaaskiisa iyo gabadhiisa: “i dhageysta qofna dadkan wali uma caawin sidaan oo kale. Ma aaminsana naxariista. Waa ay kaliya xanaaqsan yihiin.”
Tiiyoo aragtiyo kala duwan laga qaatay deeqsinimadiisa, Momoud wuxuu sheegay in go’aankiisu yahay caawinta kuwa ayaanka liita.
“Dowladda hoose xittaa ma oga dhaqdhaqaaqayga,” ayuu yiri Momoud. “Waligood maysan ogaanin howshayda, hayeeshe iyaga uma sameynin falkan. Waxaan kaliya rabaa in dadka ila nool aysan ku noolaan nolol adag.”
Previous: Lakulan: Macalinka Ardayda xisaabta ku jecleysiiya ciyaarta ama dheesha Hip-Hop-ka
Next: Farqiga iyo fursadaha kala duwan ee nolosha Miyi iyo Magaalo
Jamaaco Masjid oo u banbaxaya kaalmeynta kuwa liita!